Laba iyo tobanka South AirFly Pro ayaa hadda laga heli karaa Apple Store | Wararka IPhone
Sannadkii hore, wiilasha laba iyo tobanka Koonfurta ayaa bilaabay AirFly, aalad yar oo qalab kasta oo aad ku xirmaan u rogo la jaan qaadi kara Apple AirPods ama wixii kale ee dhegaha la 'wireless. Sannad ka dib, waxay hadda soo bandhigeen AirFly Pro oo ah nooc la hagaajiyay oo leh madax-bannaanid dheeraad ah oo ku habboon laba isku-xirnaanta isku mar.
Jiilkan cusub ayaa hadda laga heli karaa dukaamada Apple ee jireed iyo khadka toosan ee adduunka oo dhan. Ujeeddada laga leeyahay adeegsadayaasha wax soo saarka Apple, waxay noo oggolaaneysaa inaan ku xirno labadeenna AirPods iyo Beats si aad u fudud, oo ku habboon waqtiga aan dooneyno ku raaxeyso nidaamka madadaalada diyaaradaha, adigoo ku sameynaya isboortiga treadmill-ka qolka jimicsiga...
Waxaan sidoo kale ku xiri karnaa afhayeenka hore ama isku xirnaanta kaaliyaha baabuurkeena si aan ugu dirno codka iPhone-keena. Si ka duwan jiilkii hore, nolosha batteriga waa 16 saacadood, laba jeer ka dheer tan hore. Dekedda amraya waa USB-C, waxay leedahay cabirro dhan 10,92 sare, 2,6 cm ballaaran iyo 1,09 qoto dheer oo wadarta miisaanka 15 garaam.
Astaamaha AirFly Pro
Kuu ogolaanayaa inaad ku xirto ilaa labo sameecado oo wireless ah qalabka si labo qof ay u dhageystaan ​​isla codka.
16 saacadood oo ismaamul ah.
Waxay noo ogolaaneysaa inaan ku xirno godka Aux-in ee gawaarida si aan ugu raaxeysto muusikada aan ugu jecel nahay gaarigayaga.
Jiilkan labaad ee AirFly Pro wuxuu leeyahay qiimo ku yaal Apple Store oo ah 59,95 euro, oo ay ku jiraan boorsada safarka ee keydinta, daboolka leh keychain, iyo USB-C illaa USB-A fiilada lacag bixinta.
Qalabkani waa wax aan ka badnayn gudbiye buluug ah iyo qalab qaata oo ku xidhi kara jaakada dhagaha qiimo ka sarreeya moodooyinka kala duwan ee aan hadda ka heli karno Amazon. Faa'iidada kaliya ee ka weyn kuwan kaliya maahan dammaanadda ay bixisay astaanta, laakiin sidoo kale iswaafajinta wax soo saar kasta oo Apple ah, ha ahaato AirPods ama dhegeysi kasta oo Bluetooth ah oo ka socda shirkadda Beats.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Laba iyo tobanka South AirFly Pro ayaa hadda laga heli karaa Apple Store
Apple Research waxay bilawday daraasado cusub oo ku saabsan maqalka, wadnaha, dhaqdhaqaaqa iyo caafimaadka dumarka